Lahatsoratra nataon'i Chris Orlob momba ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Chris Orlob
Chris Orlob dia Talen'ny Senior Marketing an'ny Product Marketing ao amin'ny Gong.io. - ny sehatra fahaiza-manao resaka # 1 ho an'ny ekipa mpivarotra B2B. Manampy anao i Gong hanova bebe kokoa ny fantsonao ho fidiram-bola amin'ny alàlan'ny famirapiratana ny fahazavana momba ny resaka varotrao. Izy io dia mirakitra, manoratra, ary manadihady ny antso rehetra amin'ny varotra hahafahanao mitondra fiara mahomby amin'ny varotra, mamantatra izay mandeha na tsia, ary mihazakazaka haingana manakarama vaovao.
Fomba 3 Niova ny resak'ireo mpivarotra tao anatin'ny taona maro
Talata, Oktobra 3, 2017 Chris Orlob
Ny resaka varotra nentin-drazana dia miova mandrakizay. Tsy afaka miantehitra amin'ny teboka firesahana mahazatra sy maodely hita intsony ny mpivarotra hivezivezy amin'ny tsingerin'ny varotra. Izany dia mamela mpivarotra marobe manana safidy hafa fa hamerina sy hamantatra ny zava-misy vaovao mahomby amin'ny resaka varotra mahomby. Saingy, talohan'ny nandehanantsika tany, ahoana no nahatongavantsika teto? Andao hodinihintsika ireo fomba 3 nanovan'ny resadresaka varotra tato anatin'ny taona vitsivitsy. Amin'ny alàlan'ny fikarohana ny fomba fahitan'ny mpivarotra ny fifanakalozan-kevitra